Izindaba - Ngemuva kokuhlala isikhathi eside embonini ye-silicone, amakhasimende amaningi azowuzwa lo mbuzo: imikhiqizo yama-silicone enosayizi ofanayo noma isakhiwo esifanayo inamanani ahlukile.
Ngemuva kokuhlala isikhathi eside embonini yama-silicone, amakhasimende amaningi azowuzwa lo mbuzo: imikhiqizo yama-silicone enosayizi ofanayo noma isakhiwo esifanayo inamanani ahlukile. Kulesi sihloko, bekukhona
Ngaba nenkinga isikhashana. Ukuxazulula le nkinga, ngaphezu kokufunda kwabandulelayo embonini, ngiphinde ngathenga imikhiqizo yama-silicone yamanani ahlukene, abakhiqizi, kanye nezifunda zokuqhathanisa.
Namuhla, ngizokunikeza incazelo elula yenkampani yethu’Imikhiqizo, enethemba lokukusiza ukuthi uqhubeke uqonde imboni yemikhiqizo yabicah.
1. Ngokuya ngezinto: Ezinye izimboni ezikhethekile zinezidingo ezithile zesici semikhiqizo ye-silicone. Isibonelo, intengo yemikhiqizo yabicah eyenziwe ngeglue yesimo sezulu kanye nemikhiqizo ejwayelekile ye-silicone yehluke nakanjani.
2.Usayizi wesakhiwo: Elinye ijeli le-silica libukeka lifana ngaphandle, kodwa ubukhulu balo besakhiwo lungahluka, futhi isakhiwo naso siyinkimbinkimbi ngokwengeziwe, okuzothinta umphumela wokukhiqizwa, ngakho intengo ayiyona ngokufanayo.
3. Inqubo: Ukwehluka kwenqubo yokukhiqizwa kwemikhiqizo yabicah nakho kuzothinta izindleko zokukhiqiza. Njengokuphrinta kukasilika, ukuphrinta umqulu, ukudlulisa okushisayo, njll ngesikhathi sokukhiqizwa
4. Isikhunta: Inani lezimbobo kusikhunta somkhiqizo lizothinta umthamo wokukhiqiza. Kuphela lapho ukufunwa kwamakhasimende kanye nenani lezimbobo kusikhunta zifinyelela isilinganiso esizwakalayo, lapho izindleko zabasebenzi zingancishiswa futhi ukusebenza ngempumelelo kwezindleko zemikhiqizo yabicah eyenziwe ngezifiso kungathuthukiswa.
5. Isidingo: Komkhiqizo ofanayo, lapho inani lenziwe ngokwezifiso likhudlwana, intengo izoba ngcono kakhulu.
Kusukela kokungenhla, kungabonakala ukuthi intengo yemikhiqizo ye-silicone ebukeka efanayo ngeke ifane. Kuhlobene nezinto zokusetshenziswa ezisetshenzisiwe, usayizi wesakhiwo, ubuchwepheshe bomkhiqizo, inombolo yesikhunta somgogodla nobuningi be-oda.
Ngakho-ke, kunconywa ukuthi amakhasimende anqume lokhu okuqukethwe ngaphambi kokwenza umkhiqizo ngokwezifiso, bese ebambisana nomenzi wawo. I-Zhongsheng Silicone yamukela wonke amakhasimende ukuthi eze ngokwezifiso, uma nje udinga, sihlale sikhona.